WAR CUSUB: DF Soomaaliya oo Amarkii ugu cuslaa Abid dul dhigtay maamul goboleedyada dalka (Maxaa cusub?) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta WAR CUSUB: DF Soomaaliya oo Amarkii ugu cuslaa Abid dul dhigtay maamul...
WAR CUSUB: DF Soomaaliya oo Amarkii ugu cuslaa Abid dul dhigtay maamul goboleedyada dalka (Maxaa cusub?)
Muqdisho (Halqaran.com) – Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in dalka oo dhan uu Maamulkiisa leedahay Dowladda Federaalka Soomaaliya, isla markaana maamulada dalka qaarkood ay si qaldan u fahmeen nidaamka federaalka.
Mar uu Saxaafadda kula hadlayay Muqdisho ayuu sheegay in Madaxda Maamul goboleedyada qaarkood ay si sharci darro ah ugu dhoofaan wadamo kale lana kulmaan Madaxweyneyaal, taasina dalalka adduunka qaarkood la isku maxmadeeyo.
“Runtii majiri doono Maamul goboleed la kulmi doona Madaxweyne dal kale, isaga oo aan fasax ka heysan Dowladda federaalka sida horay u dhici jirtay waa ay iska kala kulmi jireen, iyada oo xataa dal cadow ah u safray‘‘ ayuu yiri Wasiir Maareeye.
Wuxuu kaloo sheegay, in Maamul goboleedyada ay isku arkaan inay yihiin dal Madax bannaan oo wixii ay doonaana ay sameyn karaan, isla markaana fo’aamo aan lagala tashan dowladda ay fuliyaan wadankii ay doonaana ay u safraan lana kulmaan Madaxdeeda.
Ugu dambeyn, hadalka Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya ayaa waxaa uu imaanayaa, xilli dowladda Federaalka uu khilaaf kala dhaxeeyo Maamulada Puntland iyo Jubbaland, sidoo kalena ay dowladda ku howlan tahay dhismaha maamulka Galmudug.
axmed November 5, 2019 At 20:06
Waa nin aan xishooney, waa war Farmaajio u soo dhiibey, walee meel xun baad ku furi doontaan Somaliya hadaan laidinka qaban. Johar , ma gaari karaan markaasuuu meela aanu gaari karin ka hadlayaa.